ब्रेल लिपिमा नेपाली बालसाहित्य – Ketaketi Online
October 20, 2019 December 24, 2021 Ketaketi OnlineLeaveaComment on ब्रेल लिपिमा नेपाली बालसाहित्य
आँखा नदेख्ने दृश्यविहीन बालबालिकाहरुले ब्रेललिपिमा पुस्तक पढ्न सक्छन् । उनीहरुका लागि ब्रेललिपिमा पाठ्यपुस्तकहरु तयार गरिएका छन् । तर, उनीहरुले पढ्न सक्ने लिपिमा ब्रेलमा बालसाहित्यको अत्यन्त ठूलो अभाव रहेको थियो । यही अभावलाई कम गर्न नेपालमा पहिलो पटक मौलिक बालकथाहरुको ६ वटा बालकथाकृतिहरु र किशोर–युवा पाठक लक्षित मुक्तक सङ्ग्रह मुक्तक मोह ब्रेललिपिमा प्रकाशित भएको छ । यस पटक ब्रेललिपिमा कृति प्रकाशित हुने लेखकहरु मनोरमा जफा, जलेश्वरी श्रेष्ठ, गङ्गा कर्माचार्य पौडेल, कार्तिकेय र रामकाजी कोने रहनुभएको छ । यी लेखकहरुमध्ये जफाको हाँस्ने सुगा, श्रेष्ठको पिङ्की र पुतलीहरु, पौडेलको को ठूलो ? र कार्तिकेयका ३ कृतिहरु क्रमशः म चोर होइन र अरु बालकथाहरु, साँच्चैको हिरो हो कृष्णबहादुर र अरु बालकथाहरु र वाहा! दुनोट पसलेकी छोरी र अरु बालकथाहरु प्रकाशित भएका छन् । यी सबै कृतिमा ६/६ वटा बालकथाहरु रहेका छन् । ‘को ठूलो ?’ नामक लेखक पौडेल लिखित कृति हेम गंगा प्रतिष्ठानले र रामकाजी कोने लिखित ‘मुक्तक मोह’ नामक कृति नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित भएका हुन् भने अन्य ५ कृतिहरु बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालका लागि
लेखक कार्तिकेयले आफ्नी ममतामयी माता देवनायिकी रामानुजदासीको स्मृतिमा प्रकाशनका लागि सहयोग गर्नुभएको हो ।
यसअघि ब्रेललिपिमा कनकमणि दीक्षित लिखित ‘भक्तप्रसाद भ्यागुता’ प्रकाशित भएको थियो । यो अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद भई ब्रेललिपिमा प्रकाशित भएको कृति हो । यसका अनुवादक वसन्त थापा हुनुहुन्छ । त्यस्तै जलेश्वरी श्रेष्ठ लिखित बालकथाहरुको संकलन ‘ पिङ्की र पुतलीहरु’ को अङ्ग्रेजी भाषा संस्करण पनि ब्रेललिपिमा प्रकाशित भइसकेको छ । यसको अनुवाद महेश पौड्यालले गर्नुभएको हो । यसको प्रथम संस्करण जलरिका साहित्य प्रतिष्ठानले र दोस्रो संस्करण बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालले प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै नेपालमा पहिलो पटक ‘नेपाली बालकथा’ नामक नेपाली बालकथाहरुको संग्रहको ब्रेलबुक प्रकाशित भएको छ । यस कृतिमा २० लेखकका २० बालकथाहरु रहेका छन् । नेपाली बालसाहित्य लेखनमा समर्पित ती २० लेखकहरु अनुराधा, वसुश्री पाण्डे, विजय चालिसे, विजयराज आचार्य, ध्रुव घिमिरे, गंगा कर्माचार्य पौडेल, जलेश्वरी श्रेष्ठ, कार्तिकेय, कृष्णदीप सिग्देल, लक्ष्मी उप्रेती, महेश पौड्याल, माया ठकुरी, प्रमोद प्रधान, राजेन्द्रभक्त जोशी, रमा अधिकारी, रञ्जुश्री पराजुली, शैलेन्दुप्रकाश नेपाल, सुशीला देउजा, तेजप्रकाश श्रेष्ठ र यशु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
यी कृतिहरु ब्रेल लिपिमा सम्पादनका लागि समिता शाक्य, रमेश सुवेदी र निरकुमार मगरले र आवरण कलामा अविन श्रेष्ठ, राजुबाबु शाक्य सारब, सोनाम तामाङ र विक्की आर्याले सघाउनु भएको छ । नेपाली बालकथा नामक कृति नेपाल बालसाहित्य समाज र बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त प्रयासमा प्रकाशित भएको हो ।
यसबाहेक रातो बंगला किताबले पनि केही बालसाहित्य कृतिहरु ब्रेल लिपिमा प्रकाशित गरेको छ । रातो बंगलाबाट प्रकाशित ब्रेल कृतिहरु बिक्रीका लागि प्रकाशित भएका हुन् भने बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान र नेपाल बालसाहित्य समाजबाट प्रकाशित सम्पूर्ण कृतिहरु दृष्टिविहीन बालबालिका आश्रित विद्यालय र बालगृहहरुका लागि निःशुल्क वितरण गरिएको छ । यस बाहेक सेभ द चिल्ड्रेन, नेपाल नेत्रहीन संघ लगायत संस्थाहरुले पनि ब्रेलबुक प्रकाशित गरेका छन् । यी बाहेक प्रकाशित अन्य ब्रेल लिपिमा प्रकाशित बालसाहित्य अहिले बालसाहित्य प्रतिष्ठानले संकलन गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानको पोस्ट बक्स नम्बर २५८५९, काठमाडौँमा आफूले प्रकाशित गरेका ब्रेल लिपिमा प्रकाशित बालसाहित्य कृति १/१ प्रति पठाइदिनुहुन प्रतिष्ठानले सबैमा हार्दिक आव्हान गरेको छ । पोस्ट बक्स नम्बर २५८५९, काठमाडौँमा भविष्यमा प्राप्त हुने ब्रेलबुकहरुबारे थप जानकारी प्रस्तुत गर्दै जाने लक्ष्य लिएका छौँ ।